Ubunjineli beRobhothi: Yonke into okufuneka uyazi malunga nolu qeqesho | Ihardware yasimahla
UIsake | 23/11/2021 09:41 | Ukuhlaziywa ukuba 24/11/2021 17:04 | Robotics
La ubunjineli berobhothi kubaluleke ngakumbi, njengoko iirobhothi kunye ne-AI zisiya zikhathalela imisebenzi ababedla ngokuyenza abantu. Ukongezelela, amakhaya nawo azaliswe iirobhothi ezincinci ukunceda ebantwini, njengabacoci bevacuum, phakathi kwabanye. Iirobhothi ziphuhliswa ukugcina abantu ababodwa kwiinkampani, ukhathalelo ezibhedlele, njl.
Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ulazi kakuhle olu qeqesho, ukuba lubandakanya ntoni kwaye ukwazi ukusondela kwenye yolu qeqesho zifunwa kakhulu namhlanje nakwixesha elizayo...
1 Yintoni ubunjineli berobhothi?
1.1 Ukuhlelwa kweerobhothi
1.2 Izinto eziluncedo kwiirobhothi
2 Ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kobunjineli berobhothi
3 Umahluko kwi-mechatronics
4 Uluhlu lweencwadi ukuqalisa ukufunda ngezi zihloko kunye nemathiriyeli
Yintoni ubunjineli berobhothi?
La ubunjineli berobhothi Lisebe elibandakanya ubunjineli kunye nesayensi yekhompyuter yoyilo kunye nokwakhiwa kweerobhothi. Oko kukuthi, indibaniselwano yezifundo ezisuka kwisayensi yekhompyutha yenkqubo yenkqubo, ubukrelekrele bokwenziwa, ukufunda ngomatshini, ukufunda nzulu, ulawulo, ifiziksi, ukuya kubuchwephesha beendawo ezihambayo zerobhothi, kunye nezixhobo zombane zokulawula ezi izixhobo.
Ukwakhiwa kwezi robhothi kuye ingqiqo, kwaye kukuba benza imisebenzi efunwa ngabantu, beyitshintsha ngokuphindaphindayo, entsonkothileyo, kwimisebenzi eyingozi, kwimizi-mveliso ezenzekelayo, njl. Kwanezizukulwana ezitsha zihamba ngaphaya koko, kwaye zinokuthatha indawo yabantu kwiindawo ezithile, ukugcina inkampani, ukusebenzisana nezilwanyana zasekhaya kunye nabantu, njl.
Zininzi izizukulwana zerobhothi, oko kukuthi, ukutsiba kuphuhliso oluphawulwe ngaphambili nasemva kubunjineli berobhothi:
Isizukulwana: iirobhothi ezisisiseko kakhulu ezilungiselelwe ukuguqulwa. Basebenza ngeendlela ezilawulwa ngolandelelwano olusisigxina okanye oluguquguqukayo.
Isizukulwana: zihambele phambili noko, kuba ziquka iinkqubo zokufunda. Noko ke, basaxhomekeke emntwini.
Isizukulwana: ulawulo lwerobhothi luyalelwa yikhompyutha, isoftwe eza kugqiba iiodolo ezicwangciswe ngumntu.
Isizukulwana: ziirobhothi ezikrelekrele, ezinenani elikhulu lee-sensor kunye nee-transducers zolwazi lwe-bidirectional yendalo kwaye zilawulwa yikhompyuter ngexesha langempela. Ukongeza, banokulindela iimfuno, ukuzimela ngakumbi.
Izizukulwana ezizayo zeerobhothi zithi zithe cwaka ezimeleyo kwaye ekrelekrele, kunye nemimandla emitsha yesicelo efunyenwe, efana nemikhosi ...
Izinto eziluncedo kwiirobhothi
Iirobhothi zinokwenza intaphane yezenzo ezenziwa ngabantu de bafike, kwaye bayenza ngaphandle komngcipheko, ngakumbi. ngokukhawuleza nangokufanelekileyo, ngaloo ndlela kongiwa iindleko. Ukongeza, bajonge ngakumbi xa bevavanya iimeko kunomntu, kwaye banokuchaneka ngakumbi kwimisebenzi ethile enzima emntwini.
Iirobhothi zinokulungiswa ngokulula ukuba kukho into engahambi kakuhle, ngaphandle kokubeka ubomi bomntu emngciphekweni, zinokufuduswa ngokulula, zicwangciswe ngokutsha, njl. Ubuninzi beenzuzo nto leyo ngokuthe ngcembe befumana imisebenzi emininzi. Into efana ne-Industrial Revolution kunye nokusetyenziswa koomatshini.
Ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kobunjineli berobhothi
Ewe izicelo Ukusuka kubunjineli berobhothi, okanye endaweni yoko, ukuya kwiirobhothi, iziphumo zolu qeqesho zezi:
Ukukhethwa kunye nokubeka iliso ngombono owenziweyo.
Ukususwa kwezinto ezinzima.
Ukutshiza kwimigca yokuhlanganisa (izikrufu, i-welding, i-drilling, ukusika, ...).
Abanye abantu babhidanisa ubunjineli berobhothi kunye Kwinkqubo, kodwa azifani, nangona babelana ngezinto ezithile kwaye banokuphela besetyenziselwa into efanayo, ukwakha iirobhothi. Kwimeko ye-mechatronics, lisebe lezobunjineli ezininzi ezidibanisa ubuchwephesha, i-electronics, isayensi yekhompyutha kunye nobunjineli bokulawula.
Injongo yeli sebe ayikokwenza iirobhothi kuphela, kodwa ukuyila, ukuvavanya kunye nokuvelisa intaphane yoomatshini abahlukeneyo (ukujoyina ii-MCUs, izinzwa, iimotor, iigiya, ...). Njengokuba, izicelo ezona zidumileyo zezi:
Ukudalwa kweemveliso ezihlakaniphile.
Oko kukuthi, iya kuba isicelo kwiindawo ezifana ishishini, imigodi, ishishini lamachiza, icandelo leemoto, njl.
Uluhlu lweencwadi ukuqalisa ukufunda ngezi zihloko kunye nemathiriyeli
Ukuzibhala ngokwakho kwaye uqalise ukwenza iiprojekthi zakho zobunjineli berobhothi, ungazisebenzisa ezi Iincwadi ezinconywayo:
Iimechatronics: Iinkqubo, iindlela kunye neenkqubo
IiRobhothi ezihambayo. Imigaqo, iindlela kunye nezicelo: iKinematics, iSihluzo seNcam, iArtificial Intelligence, iKinect, iMechatronics, iiRobhothi ezihambayo
ELEGOO UNO R3 irobhothi kit
OSOYOO Imoto yeRobhothi
I-Freenove Robot Dog Kit
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Robotics » Ubunjineli beRobhothi: Yonke into ekufuneka uyazi malunga nolu qeqesho
Ngaba eli nqaku liyahlangabezana neenqobo zokuziphatha zakho zokuhlela? Ukungachaneki kunye nobunzulu obunzulu, kodwa ngaphezu kwayo yonke into engachanekanga.
Ndiyakukhuthaza ukuba uphinde ufunde umgaqo-nkqubo wakho wokuhlela kwaye ujonge ngokunzulu inqaku.
Linqaku lokuchaza ukuba yintoni na, ukungazinzisi kwisihloko esibanzi kakhulu kangangokuba inqaku alinakwanela. Sikwanawo namanye amanqaku malunga neerobhothi zezinto ezithe kratya apho kukho into enzulu.